Vamwe vanyori nevanyori vanobva kunzvimbo iri muLa Mancha inonzi La Solana | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Nhetembo, Theater
Mazuva mashoma akapfuura akaita mutero uye akavhura hwindo kune nyika kune vamwe vanyori uye vanyori vanobva mutaundi rangu, Solana, pakati pazvo paisanganisira ini ne kutanga semunyori wenhau. Uye zvechokwadi, hazvidziviriki kusiya mazita andinoda kuramba ndichiwanazve. Nhasi pane izvi zvitatu: vadetembi vaviri uye munyori wenhoroondo uye mutori wenhau. Asi ini ndichataurawo mamwe solaneros vanyori vevhesi uye yemitambo. Ndapota, tarisa kwatiri. Ndiani anoziva hupfumi hwezvinyorwa zvisati zvawanikwa.
2 La Solana nemajeko - Aurelio Maroto
3 Kubva pamhenderekedzo iyi - Francis Alhambra
3.1 Mamwe mazita
Mudetembi wechidiki uyu 29-gore-rekare achangobatana neboka riri kukura re solaneros vanonyora uye vanoburitsa. Ichi chi rake rekutanga basa yakaratidzwa mavhiki mashoma apfuura, a nhetembo kuti iye akwanisa kugadzirisa nekuda kwekubudirira mushandirapamwe wekubata.
Silfra Ndicho yakasununguka kwazvo nhetembo nyaya, yakanyorwa mamwe mangwanani pamberi pekomputa uye akazvarwa kubva mukufemerwa kweshoko kubva kuna sisi vemunyori kwaakataura nezvaSilfra, nzvimbo muIceland. Akaita tsvagurudzo pawebhu, akaona pikicha uye akafadzwa nenyaya yake. Akazvibvumira kutakurwa uye zvese zvakabuda zvega, saka muunganidzwa uyu wenhetembo, sekutaura kwemunyori, "zvakanyanya kuzvinzwa pane kuzvinzwisisa." Bhuku inogona kuwanikwa mupepa uye dijitadhi fomati.
La Solana nemajeko - Aurelio Maroto
Mutori wenhau Aurelio Maroto ndeimwe iwo anozivikanwa mazita eiyo solanero tsika yechiitiko uye ari zvakare mwanakomana, muzukuru uye muzukuru wevapfuri vechokwadi vemajeko, chimwe chezviratidzo zveLa Solana. Kugadzira majeko Yakanga iri kweanopfuura mazana maviri emakore hupenyu hwedu hukuru uye hwakanakisa uye zvakatiitawo isu gurukota guru renyika iyi. Saka ndiani ari nani kupfuura Aurelio kuti ataure nyaya yake semutero kuropa rake uye neyavo vese vapfuri solaneros.
Iri basa rakaburitswa mu 2014 uye raive basa remakore maviri iro rakaumbwa mukati Zvitsauko 16 uye anopfuura mapeji 230. Iwo mashoma mabhuku ebhaibheri akawanikwa pamusoro penyaya iyi akabhadharwa neakawanda mabvunzurudzo nevakarega basa vapfuri nevagadziri.
Kubva pamhenderekedzo iyi - Francis Alhambra
Francis Alhambra zvinogoneka anonyanya kuzivikanwa uye anozivikanwa muimbi-munyori wenziyo weLa Solana asi, pamusoro pezvose, iye nyanduri ane mbiri uyo anopawo akakodzera mimhanzi nenzwi remavhesi ake. Nhengo yeboka Gorosi chingwa Kubva 1991, uyo ane tsika zvakanyanya uye mukurumbira wemuno nedunhu, akashandisa hupenyu hwake hwese aine gitare mumawoko ake achidudzira nyika nemumhanzi wake uye mazwi.
Akaenda ku kubva pamakumi mapfumbamwe paanotanga kukura nenzira inonyanya kukosha chimiro chake se muimbi-munyori wenziyo. Vakanga vari vega zvesimba zvakawedzerwa mukubatana pamwe nevamwe vanyori uye maartist (vadetembi, vaimbi uye akasiyana tsika nemagariro mapato epurovhinzi). Iye zvakare anotora chikamu kumatunhu emhemberero nemakonzati.
Akange atoburitsa nhetembo mubhuku ra1996 Bvisa husiku mavhesi, vhoriyamu yeiyo Espiga muunganidzwa rakapepetwa naPan de Trigo, pamwe nemagazini yekota yeboka iri rekunyora. Asi iri mu 1997 wakafunga rinhi kuburitsa rino bhuku renhetembo, Kubva pamhenderekedzo iyi.
Nekuti kuchine akawanda asara, vangangoita vese vadetembi vanoumba Pan de Trigo se Rosa Marín, Juan José Torrijos kana María José Pacheco, Ramona Romero deEvila kana Domingo Fernández.
Uye ini handikwanise kusiya zvimwe zvinonyanya kuzivikanwa munyori wenhoroondo uye munyori wenhoroondo weVilla de La Solana (nemvumo kubva kumutsivi wake uye Paulino Sánchez achangobva pamudyandigere). Don Antonio Romero Velasco, wandichiri kurangarira zvakajeka nekuti aive shamwari hombe yasekuru vangu uye, zvakare, iyeyu munyori wenhoroondo ane mabhuku akati wandei akaburitswa sa Nhoroondo yeLa Solana o Hukama hwehukama pane chitarisiko, kunamatwa, kunamatwa uye kuendeswa kweMhandara Yakaropafadzwa yePeñarroya, kudoma mashoma mashoma mazita.
Uye chekupedzisira asi chisiri chidiki, ini ndinoreva kune imwe chinyorwa chakaburitswa ino chitubu nezve shamwari yangu, director, mutambi uye mutambi wemitambo Mari Carmen Rodriguez-Rabadan. Uye ndeyekuti uyu Svondo wapfuura (re) akatanga basa rake rekupedzisira, Room 204, kuvhiya, iyo ini ndakave nerombo rakanaka kuti ndigadzirise uye, nekudaro, kunakidzwa nekuseka pamberi peumwe munhu neyakajairika mutambo, uzere nekuseka uye surrealism iyo yaifadza veruzhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vazhinji vanyori nevanyori vanobva kunzvimbo muLa Mancha inonzi La Solana